हटमेल लगइन प्रक्रिया | हटमेल साइन इन & पासवर्ड रिकभरी
तपाईं लागि उचित पुस्तिका चाहनुहुन्छ हटमेल लगइन? जो म बारेमा उचित र पूर्ण जानकारी प्रदान गर्न सिर्जना यस लेखमा मार्फत जाने हटमेल खाता कसरी लग इन गर्नुहोस्. तपाईं आफ्नो हटमेल खाता सिर्जना गर्नुभएको छैन भने त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् यहाँ गर्न हटमेल खाता सिर्जना पहिलो.
यहाँ म पनि लागि पूर्ण प्रक्रिया प्रदान हटमेल पासवर्ड रिकभरी पनि. तपाईंले यो पालना गर्न हटमेल पासवर्ड रिसेट धेरै ध्यान दिएर प्रक्रिया र तपाईं सफलतापूर्वक सही गर्न जानकारी प्रदान गर्न ठीक आफ्नो हटमेल पासवर्ड.
तपाईं फेला हटमेल लगइन प्रक्रिया यस लेखमा धेरै सजिलो. म जो सबैलाई सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ यो लेख सिर्जना गर्न धेरै नै सरल भाषा प्रयोग गरेका छन्. चरण द्रुत पुस्तिका द्वारा र तपाईं प्रविष्ट प्रक्रिया पूरा गरेपछि चरण पालन आफ्नो हटमेल इनबक्स.
पूरा जानकारी बारे यो लेख को तल माथि जानुहोस् र थाहा कसरी हटमेल खातामा साइन र पुन: प्राप्त हटमेल पासवर्ड. तपाईं आफ्नो प्रयोग गर्न प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड तपाईं आफ्नो खाता सिर्जना गरेपछि प्राप्त गरेका तपाईंको हटमेल इनबक्समा लग इन.
हटमेल लगइन प्रक्रिया | चरण प्रक्रिया द्वारा चरण
लागि तल उल्लेख कदम चित्रमाला हटमेल लगइन. उल्लेख रूपमा कदम पालना र यसलाई सफलतापूर्वक पूरा हटमेल खातामा साइन इन.
आधिकारिक पोर्टल लग इन हटमेल गर्न प्रविष्ट: www.outlook.com.
अब, मा क्लिक गर्नुहोस् “साइन इन” लगइन पृष्ठ प्रविष्ट गर्न बटन.
अब, ईमेल प्रविष्ट गर्नुहोस्, फोन, or Skype in the given space and press “अर्को”.
अब, दिइएको ठाउँ र प्रेस मा ध्यान आफ्नो पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् “अर्को”.
अन्तमा, सबै माथि कदम पूरा गरेपछि आफ्नो हटमेल खातामा प्रविष्ट हुनेछ.
हटमेल पासवर्ड रिकभरी प्रक्रिया
मामला मा तपाईं त आफ्नो पासवर्ड बिर्सनुभयो भने चिन्ता नगर्नुहोस्, तल उल्लेख गरिएको कदम पालना र आफ्नो पासवर्ड सजिलै बरामद गरिनेछ.
पहिलो, यहाँ क्लिक गरेर आधिकारिक हटमेल वेबसाइट प्रविष्टि: www.outlook.com.
अब, साइन मा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो इमेल प्रविष्ट गर्नुहोस्, फोन, वा स्काइप र प्रेस “अर्को”.
अब, अन कि क्लिक पछि “मेरो पासवर्ड भूल” पासवर्ड रिकभरी प्रक्रिया खोल्न विकल्प.
अब, तपाईं एक पृष्ठ पहिले नै प्रवेश इमेल आईडी सँग आफ्नो खाता पुन: प्राप्त भन्छन् देख्ने, प्रेस “अर्को”.
अब, यहाँ के तपाईं लागि पासवर्ड रिकभर गर्न खोज्नुभएको एक देखि विभिन्न इमेल ठेगाना प्रदान ठाउँ र प्रेस देख्नुभएको वर्णहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् र इन्टर छ “अर्को”.
तेस पछि, के तपाईं प्रवेश फरक इमेल ठेगाना मा कोड प्राप्त हुनेछ, त्यो कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् र प्रेस “प्रमाणित” टांक.
अब, जस्तै पहिलो नाम आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस्, थर, जन्म मिति, देश / क्षेत्र, राज्य / क्षेत्र, र पिन कोड र प्रेस “अर्को”.
अब, यो पृष्ठमा पहिलो, तपाईं यस खाताको लागि प्रयोग गरेको अन्य पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईं तल कुनै पनि प्रयोग आफ्नो खातामा Microsoft उत्पादनहरु उल्लेख गरेको चयन. र पछिल्लो चयन “ठाउँ” वा “कुनै” प्रश्न गर्न भनेर “के तपाईं कहिल्यै अघि माइक्रोसफ्ट केही खरिद” र प्रेस “अर्को”.
अब, पछिल्लो चरणमा, तपाईं इमेल ठेगाना तपाईंले हालसालै गर्न इमेल पठाएका प्रविष्ट गर्न. र पनि आफ्नो को सही विषय रेखाहरू हालै इमेल पठाइएको.
अन्तमा, तपाईंको जानकारी पेश गरिएको छ र यसलाई लिनेछ 24 घण्टा आफ्नो पेश जानकारी समीक्षा गर्न.
यो आलेख बारेमा छ हटमेल लगइन प्रक्रिया र हटमेल पासवर्ड रिकभरी प्रक्रिया. म सजिलै बुझ्न चरण शैली द्वारा एक सरल चरणमा यो लेख गरेका छन्. तपाईं बस कदम पालना र प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा गर्न हटमेल खातामा साइन इन.
तपाईं यो लेख बारे तपाईंको प्रतिक्रिया दिन कुनै पनि प्रश्न वा तल उल्लेख टिप्पणी बक्स प्रयोग गरेर यसलाई दिन. र तपाईं चाहनुहुन्छ भने एक फरक प्रयोगकर्ताको रूपमा Gmail लग इन तपाईं कदम कदम पनि पुस्तिका यस पोस्ट जाँच गर्न सक्नुहुन्छ.
आउटलुक खाता सिर्जना | आउटलुक साइन अप – पूरा गाइड
रिसेट याहू मेल पासवर्ड | कसरी परिवर्तन गर्न याहू मेल पासवर्ड
आउटलुक लगइन | आउटलुक खातामा साइन इन – द्रुत गाइड
हटमेल खाता कसरी सिर्जना गर्ने | साइन पूरा गाइड अप
Copyright © 2020 · Magazine Pro on Genesis Framework · WordPress · लग - इन